Yunaayitid Isteetisiif Filatamaa Prezidaantummaa (President-elect) ta’uu jechuun maal jechuudha?
Sadaasaa 14, 2020
Dimookiraatichi Joo Baayden filannoo pirezdaantummaa Yunaaytid IsteetIs baranaa irratti filatamaa prezidaantummaa (president elect) jedhamaniiru. Baayden hamma Amajjii 20, 2021 kakatanii taayitaa qabatanitti mootummaa keessatti gahee in qabaatan.
Dhabbileen miidiyaa Ameerikaa bahii filannoo walitti qabanii fi hordofan lakkoofsi Baayden Kutaa Pensilveeniyaa irraa argatan caalmaa agarsiisuu isaa Sadaasa 7 mirkaneessuudhaan, bahii sagalee gurmuu filattootaa (eleektoral vootis) moohuuf barbaachisu 270 ool argachuu isaanii ibsan. Daqiiqaalee muraasa boodas herregni hojjatame bahii san mirkaneessee Baayden mohuu isaanii agarsiise.
Sababa kaanaafi egaa, miidiyaalee hedduun, VOA dabalatee Baayden pirezdaantii ta’uuf jiraachuu kan gabaasan. Yeroo tokko tokko garuu sagaleen kaadhimamtoonni argatan walitti dhihoo yoo ta’e, miidiyaaleen abbaa mohe himanis, kaadhimamaan inni biraan mohame jedhee dubbachuu dhiisuu mala. Pirezdaant Traamp hamma ammaatti kana hin goone. Waan qabatamaa ta’e odoo hin dhiheessin, Traamp filannoon hataamuu dubbatanii mormuudhaf murteessuu himan. Ijjannoon pirezdaantichaa seera tumtoota Waashignitan yaada adda addaa akka qabaatan godheera. Ripablikaanonni himannaa Traamp kana seeran akka laalamu deeggarsa isaanii ibsanii karaa kaaniin immoo bakka-bu’oota uummataa garee isaanii irraa filannoo miilanaa irratti mo’aniif gammachuu ibsaa jiran.
Dhimmi Kun Hoom Hiikoo Argata?
Bahiin filannoo Yunaaytid Isteetis torbanoota booda raggasifama. Kana edduutti garuu dhimmichi mana murtii deemuu akkasumas Kutaalen sagalee irra deebi’anii lakkahuuf murteessuu danda’u.
Bulchiinsi Traamp haga ammatti ragaa filannoon hatamuu agarsiisu dhiheessuu baatus, iyyata isaa gama seeran gaafachuuf yeroo inuma qaba.
Takka Kutaaleen sagalee raggaasisnaan, ji’a Muddee keessa filattoonni dursanii eenyuun akka filan beeksisan (pledged electors) ka gurmuu bakka-bu’oota kutaalee sagalee kennu. San booda jalqaba ji’a Amajjii, sirni kakuu fi aangoo fudhachuu geggeeffamuuf torban lama yeroo hafu sagaleewwan kennaman hundi kongresiidhan raggaasifaman.